ओझेलमा किशे झरना
ओझेलमा किशे झरना
बिहीबार ०३, पुष २०७६
सरकारले अंग्रेजी वर्ष २०२० लाई भ्रमण वर्षको रुपमा मनाउने निर्णयसँगै सामाजिक सञ्जालमा भिजिट नेपाल २०२० ह्यासट्याग हुने क्रम पनि तीब्र रुपमा बढेको छ । नेपालमा सर्वाधिक पर्यटन भित्राउन सफल सहर पोखरा होस् या मनाङ/मुस्ताङ । अथवा पूर्वकै सुन्दर नगरी इलाम किन नहोस्, यतिबेला पर्यटकको घुँइचो बढ्न थालेको छ । आन्तरिक र बाह्य दुबै खाले पर्यटकहरु भित्रिने क्रम सँग सँगै आ–आफ्ना क्षेत्रमा बढेका पर्यटकीय चाँपले छुट्टै रौनतकता थपेको छ ।
प्राकृतिक रुपमा अत्यन्तै सुन्दर देश नेपाल विविधताले भरिपूर्ण छ । त्यसो त कला, संस्कृति र परम्पराको अनुपम नमुना हाम्रो देश नेपाल जलस्रोतमा दक्षिण एसियाकै प्रथम धनी राष्ट्र पनि हो । नेपालको पूर्वी क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने पर्यटकीय गन्तब्यहरु उती नै छन् । कन्याम, श्री अन्तु, फिक्कल हुन् या भेडेटार, नमस्ते झरना, मुलघाट, हिले उत्तिकै परिचित छन् । सायद यी ठाँउ नपुगेका सायदै कोही हुन्छन् । यद्यपी कतिपय यस्ता पर्यटकीय स्थल पनि छन्, जो प्रचार प्रसारको कमी, यातायातको असुविधा लगायत विविध कारणले प्रचुर सम्भावना हुँदा हुँदै पनि ओझेलमा परेका छन् ।
उत्तरी मोरङमा पर्ने लेटाङ नगरपालिका मोरङको एक विकट नगरपालिका पनि हो । त्यसो त लेटाङ नगरपालिकालाई मोरङको कर्णाली भनेर समेत चिनिने गरीन्छ । देशकै प्रमुख राजमार्गबाट ८ किलोमिटर टाढा मात्रै रहेको लेटाङ नगरपालिकाको कतिपय वडाहरुमा यातायातको सुविधा पुग्न नसक्नु आफैमा दुखद् हो । यस अर्थमा पनि लेटाङ नगरपालिकालाई कर्णालीसँग दाँज्दा अनौठो मान्नु पर्दैन । बजारमा मात्रै स्रोत साधनको पहुँच पुगेता पनि नगर कै अन्य केही वडामा पूर्वाधारहरुको अभावमा अनेकौ सम्भावना हुँदा हुँदै पनि यहाँका सर्वसाधारणले कष्टकर जीवन निर्वाह गर्न बाध्य छन् ।
त्यसो त महेन्द्र राजमार्गबाट ८ किलोमिटर उत्तर पर्ने लेटाङ नगरपालिका भौगोलिक रुपमा विकट भएतापनि पर्यटकीय दृष्टिकोणबाट अत्यन्तै सम्भावना बोकेको नगर हो । बजार इलाका सुगम र विभिन्न सुविधा युक्त सहर भएपनि अधिकाशं पहाडी क्षेत्र पर्दछन् । सरकारले अंग्रेजी वर्ष २०२० मा २० लाख पर्यटकलाई भित्राउने लक्ष्य लिएको समाचार हामीले पढिरहेका छौ । तर लेटाङको वडा नं. १ मा अवस्थित किशे झरना स्वयम् लेटाङ नगरमै पनि गुमनामको अवस्थामा रहेको छ भन्दा खासै फरक नपर्ला । नजिकको देउता हेला भने झै नगरबाटै उति संरक्षण नपाउनु आफैमा दुखद् छ । साविकको भोगटेनी गाविस वडा नं. ६ मा पर्ने किशे झरना, हाल भोगटेनी गाविस लेटाङ नगरपालिकामा समाहित भएसँगै लेटाङको वडा नं. १ मा पर्दछ । लेटाङ बजारबाट चारचक्के सवारी साधनमा २ घण्टाको यात्रा पश्चात किशेटार पुग्न सकिन्छ । जहाँ पुग्न लेटाङ बजारबाट २० किलोमिटर दुरी पार गर्नुपर्छ ।
हालसम्म सार्वजनिक यातायातका साधन पुग्न नसकेको उक्त स्थानमा भाडाका गाडीहरु सञ्चालनमा छन् । यस अर्थमा रिजर्भ गाडीहरुमात्रै किशेटार पुग्न सक्छन् । बाटोको अवस्था त्यति सहज भने पक्कै छैन । किशेटार पुगेपछि झरना पुग्न कम्तीमा २० मिनेट पैदल हिड्नु पर्छ । २० मिनेट समय र दुरीमा थोरै जस्तो लागेता पनि भौगोलिक विकटताका कारण सो २० मिनेट पैदल हिड्न निक्कै गाह्रो छ ।
यद्यपी बाटोमा हिड्दा चिसाङ खोला बगेको आवाज, चराचुरुङ्गीको मन्त्रमुग्ध बोली मात्र नभई अत्यन्तै सुन्दर डाँडापाखाहरु हेर्दा ती भौगोलिक विकटताका कारण दुरी पार गर्दा हुने समस्या गौण सावित हुन्छन् ।
त्यसो त लेटाङ बजारबाट किशेटारको यात्रामा निस्किदा बाटोमा धार्मिक स्थल राजारानी पनि आइपुग्छ । राजारानी आफैमा पनि इतिहास बोकेको तीर्थ स्थल हो । हाल तालमा परीणत हुने क्रममा रहेको राजारानीमा ४० भन्दा बढी प्रजातीका सुनाखरी पाइन्छ । यतिमात्र हैन, धिमाल जातीको उत्पति स्थलका रुपमा समेत चिनिने यस स्थानमा धार्मिक मनोकामनाका दृष्टिले पनि उतिकै परिचित छ । यद्यपी किशेटार पुग्न आफूसँग छुट्टै साधन नहुने हो भने राजारानी दर्शन गर्न असमर्थ भइनेछ । किनकी हामी राजारानी दर्शन गरीरहँदा किशे झरना पुग्न समय झन अपुग रहन्छ । अत्यन्तै सम्भावना बोकेको पर्यटकीयस्थल किशे झरना बास्तबमै ओझेलमा परेको छ ।
मोरङको लेटाङ नगरपालिका वडा नं. १ स्थित किशे झरना झण्डै ४० मिटर अग्लो छ । अधिकांश मगर जातीको बाहुल्यता रहेको यस ठाँउमा केही लिम्बू जातीको समेत बसोबास रहेको पाइन्छ । समग्रमा जनजातीको बसोबास रहेको यस ठाँउलाई किशेटार र झरनालाई किशे झरना भनिन्छ । । वडा सदस्य चन्चलाल मगरका अनुसार मगर भाषामा किशे भन्नाले मृग भन्ने बुझिन्छ । यस ठाँउमा मृग धेरै पाइने हुनाले यस ठाँउलाई किशेटार र झरनालाई किशे झरना भनेर नामाकरण गरेको मगरले बताए । त्यसो त यो झरना नजिकै सिंहदेवीको मन्दिर पनि छ । तथापी उचित संरक्षणको अभावमा मन्दिर पनि आझेलमा परेको मगरले गुनासो गरे । स्थानीयबासी मनकुमार मगरको पनि तर्क उति फरक छैन । अत्यन्तै सुन्दर ठाँउ भएर पनि प्रचारप्रसार नहुँदा यस ठाँउमा पर्यटक नभित्रिएको उनले बताए । झरनालाई अझ परिचित गराउन समिति नै गठन गरी अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा रहेको उनले बताए ।
त्यसो त यस ठाउँमा यातायातको सुविधामात्र हैन, शिक्षा, स्वास्थ्य खानेपानी पनि उति सहज तरिकाले प्राप्त गर्न कठिन छ । भौगोलिक विकटताका कारण विद्यालय पुग्न पनि १ घण्टा लाग्छ, सिंगो साविकको भोटगेनी गाविस हाल लेटाङ नपा वडा नं. १ भएकोमा यस क्षेत्रमा ६ वटा सरकारी विद्यालय रहेको र हालसम्म यस वडामा निजि विद्यालयहरु खुल्न सकेका छैनन् । सामान्य रुघाखोकी होस् या ज्वरो आउदा मात्रै पनि वडा कै स्वास्थ चौकी पुग्न पनि १ घण्टा भन्दा बढि समय लाग्छ ।
कृषिमा निर्भर यस वडाका बासिन्दा कुचो खेती गर्छन् । गाइबस्तु पालन, बाख्रा पालन पनि यहाका मानिसको प्रमुख पेशा हो । यहाँका मानिसहरु भटमास, दाल लगायत मौसम अनुसारको सागसब्जी उब्जनी गरी बेचविखन गरी आय आर्जन गर्छन् । नगरले बजेट छुट्याउदा यस वडालाई प्राथमिकतामा राखेपनि भौगोलिक रुपमा अत्यन्तै विकट भएकाले पनि यस क्षेत्रलाई बजेट अपुग हुनु स्वभाविक रहेको नगर उपप्रमुख कृष्ण कुमारी पोखरेल निरौलाले बताइन् । प्रचार प्रसार अभावकै कारण किशे झरना ओझेलमा परेको स्वीकार्दै चाडै नै यस झरना सम्म यातायातको सुविधा पु¥याउन नगरले हाल तीब्र रुपमा काम गरिरहेको समेत पोखरेलले बताइन् ।
साथै नगरले ४ लाख बजेट छुट्याएको भएता पनि किशे झरना लेटाङको शान भएकाले पनि आगामी वर्ष अझ थप गर्दै झरनालाई प्रचारप्रसार गर्न नगर प्रतिवद्ध रहेको उनले बताइन् । कुराकानीकै क्रममा यस वडाका वडाअध्यक्ष विष्णु मगरको भनाई पनि उति फरक छैन । लेटाङ नगरपालिकाको वडा नं. १ विकट मात्र नभई यातायातको असुविधा नै झरना लगायत अन्य ठाँउहरु ओझेलमा पर्नुको मुख्य कारण रहेको वडाअध्यक्ष मगर बताउछन् । पक्कै पनि नगरले यस क्षेत्रको सम्भावना बुझेको नै छ – उनी थप्छन् । आफ्नो वडामा प्रचुर मात्रामा पर्यटन भित्राउने सम्भावना भएर पनि भौगोलिक विकटताका कारण पर्यटन भित्राउन नसकेको मगरको भनाई छ ।
यद्यपी विजुली बत्तीको प्रक्रिया अगाडि बढेको साथै हाल टावर निर्माणका क्रममा रहेकाले अब भने सञ्चारमा समेत सहज हुने उनले बताए ।
यद्यपी नगर, प्रदेशबाट यस झरना जाने बाटो निर्माणमा मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै छिटो कामसम्पन्न गर्ने हो भने यसको सम्भावना ज्यादै रहेको कुरा नकार्न सकिदैन । पर्र्यटनको प्रमुख सम्भावना बोकेको किशे झरनालाई प्रदेश सरकारले पनि प्रत्यक्ष सहयोग गर्न सकेमा प्रदेश कै गहनाका रुपमा किशे झरना पर्यटकीय गन्तब्य गहनाका रुपमा परिचित हुनेमा दुई मत छैन ।